लकडाउनमा शिक्षा : उत्तम विकल्प ‘रेडियो’ « Pariwartan Khabar
लकडाउनमा शिक्षा : उत्तम विकल्प ‘रेडियो’
२० बैशाख २०७७, शनिबार १५:३४
२० वैशाख २०७७, काठमाडौं
कोरोनाको त्रासले विश्व नै अहिले घरभित्र थुनिएको अवस्था छ । नथुनियोस् पनि कसरी ? अहिलेका मितीसम्म यस महामारीको न औषधि पत्ता लागेको छ, न खोप नै बनेको छ । विश्वभरि लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यही भयावहबाट हाम्रो देश नेपाल पनि मुक्त हुने अवस्था छैन । भलै श्री पशुपतिनाथको कृपाले अहिलेसम्म एक जना नेपालीले पनि नेपाली भुमिमा ज्यान गुमाउनु परेको छैन । यो हामी नेपालीको अहोभाग्य सम्झिनुपर्छ ।
तर यसले सिर्जना गरेको त्रासको स्थिति भने कम छैन । संक्रमणको अवस्था जटिल बन्दै गइरहेकोछ । दिनानुदिन संक्रमण व्यक्तिको संख्या थपिँदै छ । यस अर्थमा हामी सबै जना थप सचेत भइ सुरक्षित बस्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले कोरोनाको प्रभाव हर क्षेत्रमा उत्तिक्कै परिरहेको छ । चाहे त्यो आर्थिक होस्, चाहे शैक्षिक, पछिल्लो अवस्थामा लाखौं–लाख बालबालिकाहरु लामो समयदेखि नै घरमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
विद्यालय बन्द भएको करिब डेढ महिना भयो । गत वर्षको ६ चैत्रदेखि अधिकांश बालबालिकाहरुले विद्यालयमा टेक्न पाएका छैनन् । अझ भन्नुपर्दा शैक्षिक सत्रको शुरु हुने समय भइसक्दा पनि केही विद्यालयहरुले नतिजासमेत प्रकाशन गर्न पाएका छैनन् भने एसइइ दिने अन्तिम तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु घरमा नै अन्यौलको स्थितिमा रुमल्लिरहेका छन् । अहिले नै विद्यालय कहिले खुल्छन् भनेर अड्कल गर्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।
यही अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रका बारेमा चासो चुलिँदै गइरहेको छ । विभिन्न खाले विचारहरु सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भइरहेका छन् । अहिलेको यो विषम् परिस्थितिमा लाखौं लाख बालबालिका हरुको भविष्यलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सरोकारवालाहरु सबैमा चासो र चिन्ता बढेको देखिन्छ ।
कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने ? कसरी विद्यार्थीहरुको सिकाइमा ध्यान दिएर विद्यार्थीहरु समक्ष पुग्न सकिन्छ ? भनेर विभिन्न बहस भइरहेका छन् । एकथरी विद्वान आइसिटीको माध्यमबाट सिकाउनु पर्छ भनेर कुर्लिरहेकाछन् भने व्यक्तिपिच्छे अलग–अलग धारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् । हो समयसान्दर्भिक अहिलेको एकाइसौं शताब्दीमा कम्प्युटरको जमानामा उनीहरुको सोच पनि राम्रै होला तर वास्तविकतालाई नबुझेर काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा गफ दिएजस्तो सजिलो भने छैन ।
अहिलेको अवस्थामा ‘घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ ।’ भन्ने नेपाली उखानलाई मनन गर्नु सबैले जरुरी छ । अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने कतिपय नेपालका ग्रामीण भूभागहरुमा फोनको समेत पहुँच छैन । कतिपय नेपालीहरुको घरमा विद्यार्थीहरुका लागि टिभी भनेको कुन चराको नाम हो ? भनेजस्तै छ, इन्टरनेटको कुरा भनेको ‘लंकामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भने जस्तै हो ।
शहरी क्षेत्र मात्र नेपाल होइन । अधिकांश नेपालको भूगोल ग्रामीण छ । अधिकांश विद्यालयहरु गाउँमा छन् । जहाँका विद्यालयमा बत्ती छैन । आकाशको छानामुनि पठन-पाठन हुन्छ । विद्यालय जान एकसरो ड्रेससमेत नपाएर फाटेको लुगा लगाएर खालीखुट्टा विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ । र यस समस्याका कारण वर्षेनी बालबालिकाहरु विद्यालय छोड्नसमेत बाध्य छन् । फोन गर्नु पर्यो भने आधा एक घण्टा हिँडेर अग्लो डाँडामा चढ्नुपर्ने स्थिति छ । या रुखको टुप्पोमा गएर सेल्फी खिचेजस्तो गरेर टावर टिपाउनु पर्ने दुर्दशा हामीसामु जीवितै छ ।
यस्तो परिवेशमा आइसिटीको कुरा गर्नु भनेको ‘भालुलाई पुराण सुनाउनु’ बाहेक केही हुँदैन । कि शहरी क्षेत्रमा हुने खाने, पहुँच, पावर, भएकाहरुका बच्चालाई मात्र लक्षित गरेर कार्यक्रम लागू गर्ने हो, भने भन्नु केही छैन । तर यदि हुँदा खाने हरुका लागि जसले टि.भी. इन्टरनेटको प्रत्यक्ष अनुहार होइन चित्रमा मात्र त्यो पनि किताबका पानामा देखेका छन् । जो दूरदराजमा भोकोपेट फाटेका लुगामा खालीखुट्टा हातमा किताब च्याप्दै विद्यालय जान विवश छन् ।
तिनीहरुलाई सम्झिने हो भने, यो आइसिटीको माध्यमबाट सिकाउने भन्ने कुरा भनेको दिवा स्वप्नबाहेक केही हुन सक्दैन । यहाँ विद्यार्थीहरुको मात्र कुरा होइन, अधिकांश विद्यालयमा एउटासम्म । कम्प्युटर डेक्सटपसमेत छैन । कम्प्युटर कुनै संघसस्थाबाट दिएको छ भने पनि बत्ती छैन । सेतो कपडाले शव छोपेझैँ गरी वर्षौंदेखि छोपेर राखिएका छन् अझ कतिपय शिक्षकलाई त कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान प्राय शून्य छ । कम्प्युटर अन र अफ गर्न मेत आउँदैन भने यस्तो अवस्थामा अहिले अनलाइन कक्षा सम्भव छ ?
एकथरी विद्वानहरु विद्यार्थीसमक्ष पुग्ने माध्यम प्रिटिङ सामग्री र पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको घरमा नै पुर्याउने व्यवस्थाको पनि कुरा गर्छन् । जब सामान्य परिस्थितिमा समेत परीक्षा सकिसकेपछि पुस्तक पुग्ने ठाउँहरु छन् । विगतको तितो अनुभव हामी सामु ज्यूँदै छ । अहिले पनि पाठ्यक्रम नै नभएका विद्यालयको संख्या बढी नै होला ।
यस्ता खाले पीडा र तितो यथार्थहरु हामीले भोग्दै आएका छौं । शिक्षक उपस्थित भएर नै पठन-पाठन गर्दासमेत अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकिरहेको बेला विद्यार्थी आफैँले स्वअध्ययन गरेर यो सम्भव होला ? पट्टक्कै हुनेवाला छैन ।
त्यसो भए सही विकल्प के हो त ?
मेरो विचारमा अहिलेको अवस्थामा थोरै भएपनि राहत महसुस गराउन सक्ने एकमात्र विकल्प भनेको ‘रेडियोको माध्यमबाट सिकाइ’ हो ।
रेडियो कक्षा संचालन हो । भलै यसमा पनि केही चुनौती नभएको भन्ने पक्कै होइनन् । श्रवण शक्ति कमजोर भएका तथा अपांगता भएका बालबालिकाहरुका लागि पक्कै गारो हुन्छ । त्यसमा पनि परिवारका सदस्यहरुको सहयोग पाए केही राहत हुन सक्छ । परिवारका सदस्यले आखिर उनीहरुसँग सम्वाद त गरेकै हुनेछन् । यसमा पनि रेडियो सुनेर आफ्ना नानीहरुका लागि दोभासेको भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ ।
तर अरु विकल्प भन्दा यो विकल्पमा चुनौती कम छन् । कतिपय फेसबूकेले यसमा पुरातन पद्दति पनि भनेको पाइन्छ । केही नहुनुभन्दा केही हुनु राम्रो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अहिले प्रायः मोबाइल सबैको हातमा छ । नभए घरमा एउटासम्म मोबाइल चाँहि दूरदराजतिर पनि भेटिन्छ । चाहे त्यो आइफोन होस् वाटाटाइन्डीकम को पुरानै थोत्रे सेट किन नहोस् । ती मोबाइलमा एफएम रेडियो बज्छन् नै । कतिपय ग्रामीण बस्तीका घरघरमा अझै पनि पनासिनी फिलिप्स नामका रेडियो छँदैछन् ।
कतिपयले अहिले मोबाइलले गर्दा बाकसमा थन्काएका होलान् । एफएम रेडियोको पनि कमी छैन । च्याउ उम्रे जस्तै छ्यापछ्याप्ती खुलेको अवस्थामा छन् । कम्तीमा पनि दुइ तिन एफएम स्टेसन प्रत्येक जिल्लामा सञ्चालनमा नै छन् । अधिकांश समय गीत बजाएर बसेका छन् ।
केही बालबालिकाहरुको घरमा रेडियो नहुन पनि सक्छ । त्यस्ता विद्यार्थीहरुको पहिचान गरेर स्थानीय सरकार तथा शिक्षाको भजन गाउने संघ सस्थामार्फत् व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
गाउँघरमै ठूलो मन भएका समाजसेवीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग समन्वय गरेर पनि नहुनेका लागि रेडियोको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नभए ८० करोड राहत बाँड्ने सरकार छ । रेडियो बाँड्न पनि कञ्जुस्याइँ नगर्ला । आशा चाहिँ गरौं, भर चाहिँ नपरौं । अन्य वैकल्पिक उपाय पनि खोजौं र सबैको घरमा रेडियोको व्यवस्था गरौं । ५०० देखि नै रेडियो किन्न पाइन्छ धेरै खर्चिलो पनि छैन ।
कसरी सञ्चालन गर्ने ?
हामीसँग धेरै सरकारी निजी आइसिटीका विज्ञ शिक्षकहरु र विषय विज्ञ शिक्षकहरु छन् । तहगत रुपमा विषयगत सेसन तयार पार्न शिक्षक हरुलाई आह्वान गरौं । आफूले शिक्षण गर्ने विषयको कक्षा शिक्षकले घरमा नै बसेर तयार पार्छन् र सम्बन्धित निकायमा पठाउँछन् । त्यसको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रलालय र उसका मातहतका कार्यालयले गर्नुपर्छ र विषय विज्ञको टोली बनाउनुपर्छ । शिक्षकबाट आएका कन्टेन्टहरुबाट छानेर राम्रो कन्टेन्टलाई मिसाएर एउटा फाइनल सेसन अडियो तयार गर्न सकिन्छ ।
पक्कै पनि यो एकहोरो हुने हुँदा विद्यार्थीहरुमा मोनोटोनस हुन सक्छ । रुची घट्न सक्छ । यसलाई रमाइलो र सुनौं सुनौं लाग्ने बनाउन र व्यवहारिक बनाउन विषयगत विज्ञहरुको टोलीले उत्तिकै मिहनेत चाहिँ गर्नु नै पर्छ । सबै एफएम रेडियोमा इन्टरनेटको पहुँच राम्रै छ । फाइनल भएको अडियोलाई एपएममार्फत् अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्न सकिन्छ ।
यसको लागि रेडियोमार्फत् नै सूचना अभिभावक विद्यार्थी सामु पुर्याउन चुक्नु हुँदैन । हामीले तयार पारेको कन्टेन्ट विद्यार्थीसमक्ष पुर्याउन सकिएन भने ‘हाम्रो लगानी बालुवामा पानी’ भनेझैँ पनि हुनसक्छ । तसर्थः विद्यार्थीहरुलाई रेडियो सुन्ने वातावरणमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ । सुने नसुनेको त्यसबाट परेको प्रभाव बुझ्ने संयन्त्र पनि बनाउन सकिन्छ । जसले विद्यार्थीहरुले रेडियो सुनेको र रेडियोबाट सिकाइ भइरहेको कुरा सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।
यसको लागि वडा तहमा शिक्षा समितिमार्फत् सहजीकरण गर्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय शिक्षक अभिभावकलाई समेटेर समिति निर्माण गर्न सकिन्छ । पालिका स्तरमा शिक्षा शाखा प्रमुखको अगुवाइमा अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जिल्ला स्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नेतृत्वमा र केन्द्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अगुवाइबाट सञ्चालन हुने संयन्त्र निर्माण गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
फोनको माध्यमबाट पनि अनुगमन गर्न सकिन्छ । नेट चल्ने ठाउँमा मेसेन्जर ग्रूप बनाएर पनि सल्लाह सुझाव आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।
हामीसँग विभिन्न तह र कक्षाका विद्यार्थीहरु छन् । सबैलाई सिकाउन जरुरी छ । हामीले सिकाउने विषयवस्तु कुन तहको हो ? कुन कक्षाका विद्यार्थीका लागि हो ? यसले सिकाउन खोजेको कुरा केहो ? विषयवस्तु सिकाइ उपलब्धिमा केन्द्रित हुन जरुरि छ । मूल्यांकनको पाटोलाई पनि छुटाउनु हुँदैन ।
कहीँ न कतै मूल्यांकनलाई पनि जोडेर लानुपर्छ । विषयवस्तुका साथ साथै गृहकार्यको रुपमा कक्षा सञ्चालनको समयपछि घरमै बसेर गर्न मिल्ने काम पनि दिन सकिन्छ । त्यो दिएको कामलाई गरे नगरेको अनुगमन अभिभावकले गर्दिन सक्छन् । एउटा घरमा विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरु हुन सक्छन् । ठूला कक्षाको विद्यार्थीले सानो कक्षाको भाइ बहिनीलाई सहयोग गर्न सक्छन् । छिमेकीमा शिक्षक नै पनि हुन सक्छन् , शिक्षकलाई पनि देखाउन सकिन्छ । अन्य कुनै पढेलेखेका व्यक्तिहरु पनि हुन सक्छन् ।
अहिले सबै मान्छेहरु घर फर्केको अवस्था छ । उनीहरुले पनि सहयोग गर्न सक्छन् । अत: प्रत्येक सेसनको अन्त्यमा विद्यार्थीहरुलाई विषयसँग सम्बन्धित काम दिन पनि बिर्सिनु हुँदैन । कन्टेन्ट मात्र राम्रो भएर हुँदैन । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनउन अभिभावकहरुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अभिभावकलाई रेडियो शिक्षाका बारेमा पहिले बुझाऔं अनि घरमा नै रेडियोबाट सिक्ने वातावरण सिर्जना गराउनको लागि अभिभावकलाई प्रेरित गरौं ।
सकभर बालबालिका सँगै बसेर अभिभावकलाई पनि सिकाइ वातावरणमा सहभागी गराउने प्रयास गरौं । कक्षा सुनिसकेपछि आवश्यक प्रश्न सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाऔं र सोही अनुसार समस्याको समाधान र जिज्ञासा मेटाउने प्रयास पनि गर्दै जाऔं । सुझाव संकलन गर्दै कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै जाऔं । बेला बेला स्थानीय तहबाट अनुगमनको व्यवस्था पनि गरौं ।
अहिलेको हाम्रो देशको परिवेशमा विद्यार्थीसमक्ष पुग्ने सजिलो माध्यम भनेको रेडियो नै हो । अपनाउन सके त अन्य विकल्प पनि झन उत्तम हुन सक्थे तर ती असम्भव कुरामा समय बर्बाद नगरौं । ‘सबैलाई समान शिक्षा’ भन्ने नारा मात्र भयो । जब सबैलाई समान ढंगले सिकाइदैँन । भने शिक्षामा समान अवसर कसरी हुन्छ ? त्यसैले सबैलाई समान बनाउन सबैलाई समान ढंगले सिकाऔं ।
भोलि बझाङदेखि ताप्लेजुङ र हुम्लादेखि सोलुखुम्बुसम्मका हुँदा खाने फाटोलुगा लगाएर विद्यालय जाने विद्यार्थीहरुले काठमाडौं शहरका आइप्याड चलाउने हुने खानेका बच्चाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यो पनि राज्यले विचार पुर्याउ नै पर्छ । अहिलेलाई रेडियो कै अभ्यास गरौं । पछि हाम्रा नेताज्यूहरुले भनेजस्तै सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्ड जस्तै यो देश बनाउन सक्यौं भने भर्चुअल कक्षा कोरोनाको महामारीमा मात्र होइन ।
अरु बेला पनि चलाऔंला । अब हामी ढिलो भइसक्यौं । अझैं ढिलो नगरौं । विद्यार्थीहरुमा रहेको अन्यौललाई कम गर्न भएपनि चाँडो एक्सनमा जाऔं । अहिलेलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने रेडियोको अभ्यास गरेर हेरौं ।
लेखक रीड नेपाल सोलुखुम्बुका शिक्षा विकास संयोजक तथा सगरमाथा प्रतिभा प्रतिष्ठानका महासचिव हुन् ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रवक्तामा सोमेन्द्र सिंह राठौर
रोटरी क्लब अफ पशुपतिद्वारा टिचिङ अस्पताललाई पिपिइ हस्तान्तरण
बालउद्धार माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा नयाँ नेतृत्व
नेपाली कांग्रेसले विद्यालय हाताभित्र पार्टीको भेला गर्दा बि.ब्य.स.अध्यक्षको आपत्ति
आफ्नो मानहानी गर्न खोजेको भन्दै पूजाले प्रकाश विरुद्ध कलाकार संघमा दिइन् उजुरी
पीएसओमा कोरोना पुष्टि भएपछि विष्णु पौडेल आइसोलेसनमा